Nguva Yokuverenga: 2 maminitsi Makore mashoma apfuura ini ndakasekwa pachena neumwe wandaishanda naye online pandakanga ndichigovana pfungwa dzangu kuburikidza nevhidhiyo. Dambudziko rake nemavhidhiyo angu? Ndakanga ndakabata foni yakamira yakamira kwete yakatwasuka. Akabvunza hunyanzvi hwangu uye akamira muindasitiri zvichibva pane yangu yevhidhiyo maitiro. Kwaive kupenga nekuda kwezvikonzero zvishoma: Mavhidhiyo ari ese nezve kugona kwavo kutora uye kutaurirana iwo meseji. Ini handitende kuti kutungamira kune chero chinokanganisa
Nguva Yokuverenga: 4 maminitsi Kumhanyisa inoshanda Facebook ne Instagram kushambadzira mishandirapamwe inoda sarudzo dzakanakisa dzekutengesa uye yekugadzira kushambadzira. Kusarudza izvo zvakanaka zvinoonekwa, kopi yekushambadzira, uye mafoni-ku-chiito zvinokupa iwe yakanakisa kupfura pakuzadzisa zvinangwa zvemushandirapamwe. Mumusika, kune zvakawanda zvehype kunze uko nezve nekukurumidza, nyore kubudirira paFacebook - kutanga, usazvitenge. Facebook kushambadzira inoshanda zvakanyatsonaka, asi inoda nzira yesainzi yekugadzirisa uye nekuvandudza macampaign zuva rese, mazuva ese.
Mugovera, July 15, 2017 Mugovera, July 15, 2017 Anastasia Sviridenko
Nguva Yokuverenga: 3 maminitsi Zvakafanana nebhatani remazuva ano nyore. Kunze kwekunge ichiita zvese izvo hofisi gadget yezuro rapfuura yaisakwanisa. Kutumira mameseji kungangoita seyakareruka, yakatwasuka uye inoshanda nzira yekuita chero chinhu mubhizinesi nhasi. Vanyori vanobva kuForbes vanosheedzera mameseji kushambadza muganhu unotevera. Uye ndiyo iyo iwe yausingade kupotsa nekuti kukosha kwe mobile mune yanhasi yedhijitari yekutengesa nzvimbo yakakosha. Zvidzidzo zvinoratidza kuti 63% yevanoshandisa Smartphone vanochengeta avo emagetsi
Nguva Yokuverenga: 2 maminitsi Adobe Dhijitari Insights yakaisa pamwechete yakanaka infographic (tingatarisira chero chakasiyana here?) KuHurumende yeDigital Union - inotarisana nekushambadzira kwedhijitari uye inosanganisirwa nevatengi zvinotarisirwa. Zvichida chinhu changu chandinoda pamusoro peiyi infographic ndechekuti vakatora mamota e data uye vakaibatanidza pasi kune yakasarudzika nhamba yekucherechedza uye mhedzisiro: Ad Ad Mari dziri Kukwira - sevazhinji vashambadziri vanoenda kudigital, kudiwa kwenzvimbo yekushambadza uye
Chitatu, December 30, 2015 Chitatu, December 30, 2015 John Koetsier
Nguva Yokuverenga: 3 maminitsi Masayendisiti muAntarctica ari kurodha pasi nharembozha. Vabereki muSyria vanonetseka nezvevana vanoshandisa yakawandisa tech. Vachitsuwa muAmerican Samoa vanobatana ne4G, uye sherpas muNepal vanotaura pamafoni avo vachikwenya makumi manomwe-mapaundi mitoro. Chii chiri kuitika? Hupfumi hwenhare hwasvika padanho repasi rose. Tinonzwa huwandu hukuru nguva dzese. 75 mamirioni vatsva vanyoreri nharembozha gore rino, pasirese. Mazana mazana matanhatu emamiriyoni muna 800. Wedzera zvese pamwe nezviripo
Page 1 pamusoro 4